अनुसन्धान केन्द्र कसरी सुधार्ने ? - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
- डा. सुरेन्द्र घिमिरे
अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सक्षम र सबल बनाउन राज्यले नै सुधारको पहलकदमी लिनुपर्छ ।
कार्तिक २५, २०७४-राम्रा मानिएका देशहरूमा राज्यको नीति निर्माण तथा त्यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनका लागि विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान गर्न लगाउने प्रचलन छ । यही कुराको सिको गर्दै पञ्चायतकालमा त्रिविका हालका चारवटा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएका हुन् र त्यतिबेला मुलुकमा यो मात्र एउटा विश्वविद्यालय थियो । संसद्, अदालत तथा मन्त्रालयहरूले सुरुका दिनहरूमा यी केन्द्रहरूलाई अनुसन्धानको काम लागउँथे । यी केन्द्रहरूले विदेशी अनुसन्धान संस्थाहरूसँग पनि सहकार्यमा काम गरेको पाइन्छ । समय क्रममा अन्य विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि एकातर्फ यी केन्द्रहरूको एकलौटी घट्दै गयो भने अर्काेतर्फ सरकारले निजी नाफामूलक संस्थाहरूबाट पनि अनुसन्धान गराउने कानुन बनायो । यसो गर्दा त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरूमा कामको चाप घट्दै गयो । काम घटेपछि एकातिर कामयावी अनुसन्धाताहरू केन्द्र छोडी अन्यत्र गए भने अर्काेतिर केन्द्रमा रहेकाहरूले पनि कामको अनुभव लिन पाएनन् र विस्तारै भुत्ते हुँदै गए । हाल अनुसन्धान केन्द्रका कार्यरत शिक्षकहरू विश्वविद्यालय भरिका सबैभन्दा चुस्त अनुसन्धाता हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
›डा. सुरेन्द्र घिमिरे
दलबदलु जनता ›